ရွာလည်တဲ့မှန်........ — Steemit
ပျော်စေချင်ရုံလေးရေးပေးခြင်းပါ။ဘယ်မှာမှလဲရှာမတွေ့တာနဲ့ ကြားဖူးတဲ့ဟာသလေးကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ဟာသအမြင်ဖြင့်သာ ဖတ်ရန်ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဟာသဘက်ကနေပဲကြည့်ပါ။ လျှို့ယွင်းချက် (ချွင်းချက်) အနည်းငယ်ရှိနေခြင်းအတွက်စာဖတ်သူများကိုကြိုတင်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ရှေးအခါကလူအများဟာ မှန်တွေကိုမမြင်ဖူးသေးပေ။နိုင်ငံခြားမှာတော့ပေါ်နေပြီဗျ။ဇာတ်လမ်းအစက ဒီလိုပါ.........
ကိုရင်သာဗျောတစ်ယောက် တောလိုက်ပစ်ရင်းနဲ့ မျောက်တစ်ကောင်ရပါလေရော။တောလိုက်ပစ်တယ်ဆိုတာကလည်း ဒူးလေးကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ လိုက်ပစ်တာ။ထူးဆန်းတာက မျောက်အသေလက်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အရောင်လက်လက်နဲ့အရာတစ်ခု။ ကျောက်မြတ်ရတနာလေ လော။နေရောင်အောက်ဝယ် တလတ်လတ်တောက်ပနေပေသည်။ကိုရင်သာဗျော ပြုတ်ကျတဲ့မျောက်ဆီအပြေးသွားလေ၏။ဟင်းစားမျောက်ကိုသူလောလောဆယ် စိတ်မ၀င်စားအားပါ။ မျောက်လက်ထဲက နေရောင်နဲ့လင်းနေတဲ့အရာလေးကိုသာ သူစိတ်ဝင်တစားနဲ့ ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ တည့်တည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘာပါလိမ့်....
အလို......လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တုန်းကသေသွားတဲ့ ငါ့အဖေပုံပါလားဟ။ မှန်ကား မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားပေ။ကြည့်လိုက်ရင် မူရင်းရုပ်နဲ့နည်းနည်းလွဲနေတာမျိုး။မှန်ထဲမှာနည်းနည်းရုပ်ဆိုးသွားတဲ့မှန်ဘီလူးမျိုး။ အာတွေဘာတွေ နည်းနည်းရွဲ့တာပေါ့လေ။အဖေ့ကိုလွမ်းနေတာနဲ့အတော်ပေ။ ပုံလေးကိုကြည့်လိုက် နမ်းလိုက်နှင့် ကြည့်လို့ကားမ၀။မျောက်သေလေးနားမှာ အတန်ကြာ မျက်ရည်ဝဲလျက်...။အမေက ငယ်ငယ်ထဲကမည်သူမည်ဝါဆိုတာသူမသိခဲ့။ဒီအဖေကြီးကိုပဲချစ်ခဲ့ရတာ။ခုတော့နတ်သိကြားတွေက သားအဖနှစ်ယောက် အရမ်းချစ်တာကိုသိလို့ သူ့ကိုယ်ပွားလေးကို ငါ့ဆီအရောက်ပို့လိုက်တာပါလား။အမြတ်တနိုးသိမ်းထားမှပဲဆိုပြီး...အိမ်ကိုပြန်လာတော့ မျောက်သေလေးကိုထမ်းလာတယ်။ခါးကြားမှာ မှန်လေးထိုးပြီးတော့ဖွက်ထားရသေးတယ်။ဘာလို့ဖွက်ထားရလည်းဆိုတော့ သူ့မိန်းမက လော်စပီကာ။တစ်ရွာလုံးလျှောက်ပြောမှာ ဒါကိုမြင်ရင်။ဒါနဲ့ သူမပြောတော့ဘူးသူ့မိန်းမကို။သူ့အ၀တ်ပုံကြားထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်။မိန်းမကိုပြောမလို့စဉ်းစားကြည့်တော့ အိမ်မှာလူတရုန်းရုန်းနဲ့ဖြစ်နေမှာ မပြောပဲနေတာကောင်းပါတယ်လေဆိုပြီးတော့ အလုပ်သွားရင် အဲ့မှန်လေးကို နမ်း ၊ ပြန်လာရင်ထုတ်ကြည့်နမ်း။ ဖအေကိုတော်တော်ချစ်တာကိုးဗျာ။ ဒါနဲ့ကြာလာတော့သူ့မိန်းမက မသင်္ကာတော့ဘူး။သူလဲအလုပ်သွားရော အဲ့တာကိုဆွဲထုတ်ကြည့်တာ။ဘာလဲပေါ့...
အလို......ကိုရင်သာဗျော မယားငယ်ထားနေတာပါလား။သူ့မယားငယ်ပုံကို သူ့အ၀တ်ခေါက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးနမ်းနေတာကိုး။အောင်မယ်လေး အရပ်ကတို့ရေ ကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လား.......။မယားငယ်မက ငါ့လောက်တောင်လှမယ်မထင်..ဒါကိုများ ဒင်းကဘာတွေမက်ပြီးတော့ နောက်ထပ်အမြှောင်မယားထားတာပါလိမ့်။ပြန်လာရင်တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ ဓါးဆောင်ထားလေရဲ့။အဖြစ်မှန်သိလို့ကတော့ တစ်ချက်ထဲခုတ်ထည့်လိုက်မယ်။မုန့်သာဝေစားမယ် ဒါမျိုးတော့ မဝေစားနိုင်ဘူးတော်ရေ ဆိုပြီးတစ်ယောက်ထဲပြောပြောပြီးငိုနေတာ တနေကုန်။ပြန်လာရင်တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့ဗျာ။ယောက်ကျားပြန်လာတော့ မီးဖိုချောင်ထဲ ထရံပေါက်ကြားထဲက ချောင်းကြည့်နေတယ်။ သူဘာလုပ်မလည်းပေါ့။
ဒါနဲ့ကိုရင်သာဗျော တောထဲကမောမောနဲ့ပြန်လာတော့ သူ့အဖေပုံလေးအလွမ်းပြေကြည့်မယ်ပေါ့။ သူ့အဖေပုံလေးကို လက်ထိုးထည့်ပြီးစမ်းလိုက်တော့ အရင်နေရာမှာမတွေ့။ ဒါနဲ့ အ၀တ်တွေအကုန်လှန်ရှာ။မတွေ့။ဟာ..ဒါမိန်းမလက်ချက်ဆိုတာသူ သိလိုက်ပြီ။အိမ်မှာ ကလေးလည်းမရှိဘူးလေ။ဒင်းပဲနေမှာ။
အံမယ် သူ့မယားငယ်ပုံကို လိုက်ရှာနေတာ အလုပ်ကပြန်လာတော့။ငါ့တော့မမေးဘူး။ခေါ်လည်းမခေါ်ဘူး။တွေ့မယ်ဒင်း။
"မိန်းမရေ ဒီထဲက ပစ္စည်းလေး မင်းယူထားလား"
"ဒီမိန်းမ ငါလုပ်လိုက်ရင်သေတော့မယ်။ဘယ်ကမယားငယ်လဲဟ။ ငါ့ပြန်ပေးစမ်း။အဲ့ဒါသေသွားတဲ့ ငါ့အဖေရဲ့ပုံဟ"
"အောင်မယ်လေး လက်တို့ပြီးတောင်ရယ်လိုက်ချင်တာပဲတော်ရေ့ ....ဟော့မှာလာကြည့်စမ်း ကျုပ်နားကို ရှင့်အဖေပုံလား ရှင့်မယားငယ်ပုံလားဆိုတာ"
"ဟာ...ငါ့အဖေပုံက မိန်းမပုံပြောင်းသွားပါလားဟ။ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း ပေးစမ်းငါ့ကို။"
"ဟောဒီမှာကြည့် ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တုန်းက သေသွားတဲ့ ငါ့အဖေ တွေ့ပလား..... ဟင် .... ဂန်းနာမ။"
မနန်းလည်း သူ့နားလာကြည့်တော့ ဟုတ်သား။သူ့အဖေပြောင်းသွားတယ်။သူယူကြည့်တော့ သူ့မယားငယ်ပုံပြောင်းသွားတယ်။သူ့ယောက်ကျားယူကြည့်တော့ သူ့အဖေပုံပြောင်းသွားတယ်။စဉ်းစားမတတ်တော့ ဓါးနဲ့ခုတ်ဖို့နေနေသာသာ။ဒါနဲ့ပဲ ရှင်းမရတဲ့အဆုံး ဆရာတော်ကြီးကို သွားလျှောက်ပြီးအဖြေမှန်တောင်းမယ်ဆိုပြီး ရွာဦးကျောင်းကိုချီတတ်တာ။ ဟုတ်တယ်လေ ဆရာတော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူမှပဲ နားအေးမှာ။တစ်ရွာလုံးက ဆရာတော်ကြီးရဲ့အမိန့်ပဲ ။ ဆရာတော့်ဆီရောက်တော့ ဦးချပြီး လက်ထဲပါလာတာလေးပြ။ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလေတော့....ဆရာတော်ကြီးက မှန်ကို ဝေးဝေးထားကြည့်လိုက်၊ အနီးကပ်ပြန်ဆွဲကြည့်လိုက်နဲ့ ...ပြီးတော့ ရယ်လိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့။
"အိမ်း နင်တို့လင်မယားကို ကျုပ်က မျက်လုံးကောင်းလှပြီမှတ်တယ်..တယ် မွဲကြသကိုး။ နင်တို့ပြောနေတဲ့ ဟာတွေတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဟဲ့ ။ ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်တုန်းက ပျံလွန်တော်မူသွားတဲ့ တို့ဒီရွာဦးကျောင်းက ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပုံဟ"
စာဖတ်သူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ဘ၀အမောတွေပြေပျောက်ကြပါစေဗျာ။
THANK YOU VISIT TO MY BLOG.GOODLUCK ALL STEEMIT FRIENDS.
myanmar story lol writing blog
​တော်​​သေးတာ​ပေါ့ အစ်​​ကို ​ရေ . ဆရာ​တော်​တင်​ရပ်​သွားလို့ .. တစ်​ရွာလုံးများသိကုန်​ရင်​ ရွာပျက်​ကိန်းဗျို့ .. ဟား ..ဟား . ​ကောင်းတယ်​ဗျို့ ..
ဟေးဟေး အမှန်ပဲဗျို့ ကိုမြန်မာရေ။ဆရာတော်ဆီအရင်သွားလို့ မသွားရင်ရပ်အုံးမှာမဟုတ်ဘူး ဇာတ်လမ်းက။
ဟာ အရမ်းလှတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ပုံပါလား!
ဒီလောက်ချော ဒီလောက်လှတာ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး 😂
ဒါကြောင့် ကြည့်သူတိုင်းအတွက် မှန်ပါဆို
ဟီးဟီး အထူးအဆန်းဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရား ဘုန်းပေးဖို့မြို့အသီးအထူးအဆန်းလေး ဝယ်လာတယ်ဘုရား ဘုန်းကြီးကောက်ဝါးလိုက်တာ ဂွပ်ခနဲ သွားတွေကျိုးကုန်တယ် ဘာသီးတုန်းဆိုတော့မှ ဂေါက်သီးပါဘုရား ခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်
ဆရာတော် ကယ်ပေလို့ ပ
မှန်ဇာတ်လမ်း အရှူတ်တော်ပုံက သူမိန်းမကြည့်မှ ရူပ်တော့ပီလေ...တိန်..တိန်..:-)
aunggyi100 (54) · last year (edited)
အရင်​တုန်းက ဟိုးအရင်​တုန်းက မှန်​မ​ပေါ်ခင်​ကဖြစ်​မယ်​
လက်မထောင်နိုင်ပေမပေါ့ အရေးအသားက ကောင်းတာကိုးလို့စ်
ဒိတိုင်းမှန်ပါတယ်၊ ဒါလည်း On the road ပါပဲ။
အရေးအသားက ကောင်းလွန်းတယ် မိုက်မိုက်
ဒီပုံပြင်လေး ငယ်ငယ်က တော့ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ.ခိုခိုဇာ အရေားအသားနဲ့ပြန်လည်ပွဲထွက်လာတော့ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်ဗျို့
အင်း ကိုဇာရေးလိုက်မှ ပုံပြင်လေးက တစ်မျိုးဆန်းသွားတယ် ဗားရှင်းမြှင့်လိုက်တာပေါ့လေ။
ကောင်းဘူးမမ pro တောင်မရဘူး မကောင်းလို့ ဟိ။